စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update
September 16, 2009 — mmweather
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အခု စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ CHOI-WAN က အခုဆိုရင် အဆင့်-၅ – အဆင့်အမြင့်ဆုံး စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး အဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး တစ်နာရီကို မိုင် ၁၆ဝ မှ ၁၉၅ မိုင်အထိ ပြင်းထန်တဲ့ လေတိုက်နှုန်းဖြင့် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၁၁ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်းသိရပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Luzon ကျွန်းအရှေ့ဘက် မိုင် ၁၃ဝဝ ကျော် (ကီလိုမီတာ ၂၆ဝဝ ခန့်)မှာ ရောက်နေတဲ့ ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ သောကြာနေ့ GMT 0900PM မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ စနေနေ့ မနက် ၁ နာရီခွဲလောက်ကျရင်တော့ အားပြန်ပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထား ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ အဆင့်-၅ CAT-5 Super Typhoon အဖြစ်နဲ့ Alamagan-Agrihan Islands ကို ဖြတ်ကျော်တိုက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ အချင်းပမာဏဟာ ၉၂၅ ကီလိုမီတာ – (၅၇၅ မိုင် – ၅ဝဝ နော်တီကယ်မိုင်) အထိရှိနေပြီး အလွန်ကြီးမားတဲ့ အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းတိုင်းတာရေးအဖွဲ့တွေက တိုင်းတာရရှိတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရဲ့ လေတိုက်နှုန်းတွေကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
CHOI-WAN (15W) MAX WIND SPEED PER AGENCY:
(will be updated here as soon as mmweather gets info)
click on picture to view original size 222 KB
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တစ်ခုသာကျန်တော့သော Super Typhoo Choiwan
5 Days – forecast map
Posted in Education, Weather News. Tags: CHOI-WAN, typhoon, weather.2Comments »
2 Responses to “စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN update”
CHOI-WAN စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ ဒီနှစ်အတွက်တော့ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းကြီးပါဘဲဗျာ .. ဟု Jim Andrews က AccuWeather Weather Blog တွင် ရေးသားထားပါသည်။ သူစာရေးသည့်အချိန်က JTWC မှ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး၏ လေတိုက်နှုန်းမှာ ၁၃၅ နော်တီကယ်လ်မိုင် (၁၅၅ မိုင်နှုန်း) ရှိတယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဘလော့မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်၊ ကျနော် သူ့ဘလော့ကို မှတ်တမ်းတင်ဘို့ ဖွင့်ကြည့်ချိန်မှာ တစ်နာရီကို မိုင် ၁၆ဝ မှ ၁၉၅ မိုင်နှုန်းအထိရှိတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်နေပါပြီ ….
read more on page http://mmweather.ning.com/profiles/blogs/super-typhoon-choiwan
Please visit http://www.mmweather.com/live-response.html
You can leave message there or you can get LIVE-chat with mmweather administration team.
« စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN ၏ ယနေ့တိုင်းထွာရရှိသောလမ်းကြောင်းအခြေအနေ
Super Typhoon Choi-Wan – Shared post from NASA Earth Observatory »